စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် လာရောက် စားသောက်သူ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ကြရာမှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်?? - Yangon Media Group
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့ ဝါးတောလမ်းရှိ စား သောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းတွင် လာရောက်စားသောက်သူအချင်းချင်း စကားများရန်ဖြစ်ကြရာမှ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သထုံမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့ ဝါးတောလမ်းရှိ …စား သောက်ဆိုင်တွင် သြဂုတ် ၃ဝ ရက် ည ၉ နာရီကျော်ခန့်က အောင် မျိုးသူနှင့် မိတ်ဆွေများသည် ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်ပြီးနောက် ပြန်ထွက် လာစဉ် အောင်သူရိန်(ခ) တရုတ်ဆိုသူက စားသောက်ဝိုင်းတွင် ဆူညံလွန်းသည်ဟုဆိုကာ စကားများရန်စခဲ့ပြီး ၎င်းတွင် အသင့်ပါလာ သော သေနတ်(အမျိုးအစားစိစစ်ဆဲ) ဖြင့် မိုးပေါ်သို့ သေနတ်တစ်ချက်ထောင်ပစ်ခဲ့ပြီး အောင်မျိုးသူအား သေနတ်ဖြင့် ဆက်လက်ပစ် ခတ်ခဲ့ရာ အောင်မျိုးသူ၏လည်ပင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သေနတ် ဖြင့်ပစ်သူမှာ အောငမျိုးသူအား သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးနောက် ¤င်း စီးနင်းလာသော အဖြူရောင် တိုယိုတာမက်တူးအမျိုးအစား မော်တော် ယာဉ်ဖြင့် မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းအရသိရ သည်။
ဖြစ်စဉ်သတင်းရလျှင်ရခြင်း သထုံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ သထုံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများက အခင်းဖြစ်ရာနေရာသို့ သွား ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး သိမ်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ အောင်သူရိန်၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရာ သေနတ်ဖြင့်ပစ်သူမှာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပြီး ၎င်းပစ်ခတ်ခဲ့သည့် သေနတ်ကျည်ခွံနှစ်ခုနှင့် ၎င်းမောင်းနှင်သွားခဲ့သော မော်တော်ယာဉ်အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
”သေနတ်နဲ့ပစ်သူကတော့ ထွက်ပြေးသွားတယ်။ သေနတ်ဒဏ် ရာရသွားတဲ့သူကတော့ သထုံခရိုင်ဆေးရုံကြီးမှာ အတွင်းလူနာအနေနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။ ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နေပါတယ်”ဟု သထုံမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သူ အောင်သူရိန် (ခ) တရုတ်အား သထုံမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၇၄၃/၂ဝ၁၈ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ (၃ဝ၇)ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
(၄၃)ကြိမ်မြောက် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်ခြားကော်မတီ အစည်းအဝေး မဲဆောက်၌ ကျင်းပ၊ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင??